Iifowuni ezili-10 eziPhezulu zokuSebenza ngoJulayi 2021 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iifowuni ezili-10 eziphezulu zokuSebenza ngoJulayi 2021
UAron Rivas | 06/07/2021 11:11 | Izixhobo ze-Android, Izaziso
Enye yeebenchmark ezaziwa kakhulu, ezaziwayo nezithembekileyo kwihlabathi le-Android, ngaphandle kwamathandabuzo AnTuTu. Kwaye, ngokudibeneyo neGeekBench kunye namanye amaqonga ovavanyo, oku kuhlala kunikelwa kuthi njengebhentshi elinokuthenjwa esilithatha njengendawo ekubhekiswa kuyo kunye nenkxaso, kuba isinika ulwazi olufanelekileyo xa kuziwa ekwazini ukuba namandla kangakanani kwaye isebenza kakuhle. iyiselfowuni, nokuba yeyiphi na.
Njengesiqhelo, i-AnTuTu ihlala yenza ingxelo yenyanga okanye, endaweni yoko, uluhlu lweetheminali ezinamandla kwintengiso, inyanga nenyanga. Ke ngoko, kweli thuba litsha sikubonisa inyanga kaJuni, neyokugqibela evezwe ngumgangatho kwaye ihambelana nale nyanga kaJulayi. Masibone!
1 Le yeyona miba ikumgangatho ophezulu ngokusebenza kakuhle ngoJulayi
2 Olona luhlu luphakathi luqhuba kakuhle
3 I-Black Shark 4 Pro, eyona mfono inamandla ngalo mzuzu
Le yeyona miba ikumgangatho ophezulu ngokusebenza kakuhle ngoJulayi
Olu luhlu luye lwatyhilwa kutshanje kwaye, njengoko sibonisa, Yeyokugqibela kaJuni, kodwa isebenza ngoJuni kuba yeyona nto iphambili kutsha nje, ngenxa yoko i-AnTuTu inokukunika oku kuluhlu olulandelayo lwenyanga, esiza kuyibona ngo-Agasti. Nazi ii-smartphones ezinamandla kakhulu namhlanje, ngokweqonga lokuvavanya:
Njengoko inokuchazwa kuluhlu esincamathisele apha ngasentla, I-Black Shark 4 Pro kunye ne-Red Magic 6 Pro ngamarhamncwa amabini akwisikhundla sokuqala, ngamanqaku ayi-849.822 kunye nama-833.276 ngokwahlukeneyo, kwaye umahluko awubanga mkhulu kakhulu ngokwamanani phakathi kwabo. Ezi smartphones zineqonga leselula I-Qualcomm's Snapdragon 888.
Indawo yesithathu, yesine neyesihlanu zihlala kuyo I-OnePlus 9 Pro, i-Oppo Fumana i-X3 Pro kunye neVivo X60 Pro +, ngamanqaku angama-824.459, 818.689 kunye nama-811.808 ngokwahlukeneyo, ukuvala iindawo ezintlanu zokuqala kuluhlu lwe-AnTuTu.
Okokugqibela, isiqingatha sesibini setafile senziwe nge-IQOO 7 (811.508), OnePlus 9 (810.916), Realme GT (810.141), ROG Phone 5 (808.576) kunye neXiaomi Mi 11 Ultra (797.379), ngolandelelwano olufanayo , ukusuka kwindawo yesithandathu ukuya kweyeshumi.
Olona luhlu luphakathi luqhuba kakuhle
Ngokungafaniyo noluhlu lokuqala esele luchaziwe, olulawulwa kuphela yiprosesa ye-chipset ye-Snapdragon 888, uluhlu lweefowuni ezili-10 eziphambili zeefowuni eziphakathi kuJulayi 2021 nguAnTuTu unee-smartphones ezineeprosesa zeMediaTek., IKirin kwaye, ewe, iQualcomm. I-Exynos yakwaSamsung, njengakwiinguqulelo ezidlulileyo, azikho ndawo ngeli xesha.
Emva kweXiaomi Mi 11 Lite 5G, ekwaziyo ukuphawula inani eliphakamileyo lama-531.531 kwaye ixhotyiswe yiMediatek's Dimension 820, iHonor 50 Pro, enikwe amandla yiSpapdragon 778G, ibekwe kwindawo yesibini, inamanqaku angama-513.422 . Oku kulandelwa yi-Honor 50, ngamanqaku angama-505.028. Le yokugqibela isebenza neSpapdragon 778G ngokunjalo.
I-Oppo Reno6 5G, iRealme Q3 Pro kunye neRedmi 10X 5G ikhusele indawo yesine, yesihlanu neyesithandathu, ngokulandelelana, ngamanani angama-481.288, 452.616 kunye nama-452.596. IQOO Z3 ikwindawo yesixhenxe, inamanqaku angama-445.827 amanqaku.
IHuawei Nova 8 Pro kunye neNova 8 zikwindawo yesibhozo neyesithoba, kunye ne-438.936 kunye ne-435.681, ngokulandelelana. Eyangaphambili yi-smartphone exhotyiswe ngeKirin 985 enamandla, ngelixa eyokugqibela ikwatsho neNkqubo kwiChip. Inkqubo ye- Huawei Nova 7, kunye neKirin 985 kunye namanqaku ayo angacacisekiyo angama-435.306 afunyenwe kwiqonga lovavanyo, yeyona smartphone yokugqibela kuluhlu lwe-AnTuTu.
Iindidi zeetshipsi esizifumeneyo kolu luhlu ziyabonakala, nangona oku kungabandakanyi iimodeli ze-Exynos, kodwa le sele ingumbandela weSamsung, njengoko ingakhuphisani kakhulu kweli candelo, ngokwendlela yokusebenza kunye namandla. Oku kwenzeka emva kweMediatek kunye neHuawei, kunye neKirin yabo, ishiye iQualcomm ngaphandle kuluhlu lwangaphambili. Sele umenzi waseMelika ebeka iibhetri kwakudala kwaye wakwazi ukubeka iichipsets ezininzi kule ndawo iphezulu, eshiya enye yakhe kwindawo yokuqala.
I-Black Shark 4 Pro, eyona mfono inamandla ngalo mzuzu
Ukuyinika ukwamkelwa okukufaneleyo, siza kuthetha ngeempawu kunye nokuchazwa kobuchwephesha kweyona smartphone inamandla okwangoku, ngokokuphakama kwesiphelo esiphakamileyo ngokusebenza ngokukuko kulo nyaka.
IBlack Shark 4 Pro yiyo isixhobo sokudlala esiza nesikrini esine-6.67-intshi ye-diagonal Super AMOLED ngesisombululo esigcweleyo se-pixels ezingama-2,400 x 1,080 kunye nefomathi yokubonisa engama-20: 9. Lo mboniso ubeka inqanaba eliphezulu lokuhlaziya le-144Hz, inkxaso ye-HDR10 yokunikezela ngokuchanekileyo okumhlophe kunye nombala, kunye nokukhanya okuphezulu kwe-1,300 nits.
Ngokubhekisele kwiprosesa yakho, isebenzisa iQualcomm's Snapdragon 888I-chipset ehlala emathunjini ayo kwaye ikwazi ukufikelela kumaza aphezulu ewotshi ye-2.84 GHz. I-GB kunye ne-660 okanye i-8 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Ewe kunjalo, akukho nkxaso kwikhadi le-MicroSD, ke le terminal ayinakho ukwandiswa kwememori yeROM.
Kwelinye icala, i-Xiaomi's Black Shark 4 Pro inekratshi yenkqubo yekhamera yangemva kathathu nge Imodyuli engundoqo engama-64 ye-MP ene-f / 1.8 ukuvula, Inzwa yekhamera yesibini ye-8 MP ene-f / 2.2 ukuvula kunye ne-2 MP yokugqibela yokudubula kunye nef / 2.4 ukuvula iifoto ezinkulu. Kwelinye icala, inika ikhamera engaphambili engama-20 MP ngef / 2.5 ukuvula emngxunyeni kwiscreen esikumbindi ophezulu wesikrini.
Ibhetri yesiphelo yile Umthamo we-4,500 mAh kwaye ixhasa itekhnoloji yokutshaja eyi-120 W ngokukhawuleza. Ndiyabulela koku, iselfowuni inokuhlawuliswa i-50% kwimizuzu emi-5 kunye ne-100% malunga nemizuzu eli-15. Ngokuqinisekileyo le yeyona nto iphambili kwaye, kwangaxeshanye, inomdla.
Ezinye izinto zibandakanya inkqubo yokupholisa, umfundi ofakwe iminwe kwiminwe yokufunda, i-Android 11 phantsi kwe-MIUI 12.5, i-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, iBluetooth 5.2, i-NFC yokwenza iintlawulo ngaphandle konxibelelwano (ngaphandle konxibelelwano), igalelo le-jack ye-headphone kunye ne-stereo izithethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iifowuni ezili-10 eziphezulu zokuSebenza ngoJulayi 2021
Ezona 7 zekhampasi zintle zeapps
Ezintandathu intaba-mlilo kunye neenyikima zokusebenza ze-Android